Isu tinoongorora iyo iPhone X, iyo foni inozotara nguva | IPhone nhau
Isu tinoongorora iyo iPhone X, iyo foni inoisa mucherechedzo wenguva
Miguel Hernandez | | iPhone X, Apple zvigadzirwa
Wanga wakamirira, uye semu iPhone News tinovenga kuti unoruma nzara dzako, tafunga kukuunzira kubva pazuva rekutanga kwayo kuongorora kwakakosha kwazvo kwegumi ramakore apfuura. Isu tine iyo iPhone X uye isu tinoda kukuudza iwe izvo zvatinoona zvave zviri.
Chigadzirwa chakapihwa nekambani yeCupertino hachidi kusiya chero munhu asina hanya, saka isu tinofanirwa kuenda kunoshevedza zveruzivo uye kunyatso tarisa kuti chii chine chiuru-euro foni. Gara nesu, gara pasi uye unakirwe ne iPhone X ongororo.
Semazuva ese, isu tichaenda tichitora nzira ipfupi munzira iyo ino yakasarudzika tsika inozvibata mune chero mamiriro ezvinhu, pamwe nekukosha chaiko kwezvinhu zvitsva. Zvese izvi pasina kuregeredza hunhu hwezvinhu zvaro uye Hardware mune yakajairika nyika. Iva sezvazvingaita, Ini ndinokurudzira kuti iwe ushandise iyo index kana iwe uchida kuenda zvakananga kune chakatarwa chikamu ... Handei ikoko!
1 IPhone X dhizaini uye zvigadzirwa
2 Apple A11 Bionic, processor ine simba kwazvo pamusika
3 Iyo yakajeka kwazvo skrini Apple yakambovakwa parunhare
4 Chii chakaita kushandisa iOS 11 pane ese screen foni?
5 Chiso ID iri kugara, ruzivo rwedu neiyi tekinoroji
6 Iwo makamera eiyo iPhone X anotora chigaro chekumashure
7 Pfungwa dzeMupepeti: Iyo Yakanakisa Nhare
IPhone X dhizaini uye zvigadzirwa
Apa ndipo pamwe patinozowana zvakanyanya uye zvishoma. Iyo iPhone X iri kuseri kwemapatya hama yeiyo iPhone 8, uye ndeyekuti girazi rayo rakadzoka kumashure zvinotiyeuchidza nezve iyo iPhone X, ichiponesa mutsauko. Kunyangwe zvakadaro, iyo yakatwasuka mamiriro eiyo mbiri kamera (iyo Apple isati yatsanangura parizvino) hapana mubvunzo chiratidzo shure kweiyi foni. Mativi acho akaputirwa mune yakajeka uye yakawedzera toni simbi kupfuura iyo yatakanakidzwa kusvika pari zvino, ichirova zvikuru uye iri rinonakidza retro wink.
Kudivi rekuruboshwe isu tinoramba tichichengeta bhatani reodhiyo kukwira nekudzika, ichiperekedzwa neshanduro yekurira iyo Apple yakawedzera mukurumbira kweasina pasi pemakore gumi. Hushoma shanduko kudivi iri uye kurudyi, yakachengeterwa iyo Simba / Mira neBhatani. Muchikamu chepamusoro isu hatina kana chinhu, nepo chikamu chepazasi chakachengeterwa mutauri uye maikorofoni, isu tinokanganwa zvakare chero chidimbu che 3,5mm Jack chinobatanidza, Apple inodzoka kubheja paMheni sechirevo chekubatana.
Pasina kupokana, musiyano mukuru unouya kumberi, zvese skrini yeiyo iPhone X iyo ine yepamusoro "rurimi" kune ese maFace ID sensors uye TrueDepth makamera aripo. Usatarise bhatani reKumba, harisisipo. Ndiyo shanduko yakanyanya kukunda yataigona kunge takafungidzira kubva kukambani yeCupertino, pasina mubvunzo, asi chikamu chayo chakanyanya kusiyanisa. Iyo terminal inovakwa mudunhu-re-iyo-goridhe Gorilla Girazi zvese zviri kumberi uye kumashure mapaneru, pamwe nesimbi yakabwinyiswa yesimbi, iyo chaiyo simbi iyo yatakawana muzvinyorwa zvakapfuura zveApple Watch, zvinowirirana nehutera hwakafanana, kukwenya. Pfungwa iwe, iyo premium uye retro kutarisa panguva imwe chete kwakaoma kuenzanisa, zvakangonaka.
Nezve zviyero, tenemos 143.3 x 70.9 x 7.7 millimeters ye 174 gramuHaisi yakanyanyisa kupenya, asi tichifunga nezvesimba uye Hardware iyo yadzinogara mukati, zvinoita kunge zvisinga nyatso kurema kwatiri kana.
Apple A11 Bionic, processor ine simba kwazvo pamusika
Iyo iPhone X inouya neiyo imwechete processor seye "mudiki" hama iyo iPhone 8, iyo A11 Bionic inogadzirwa neTSMC Ne dhizaini yekambani yeCupertino, matanhatu-eprotein processor yekufananidzwa kumisikidzwa, maviri acho epamusoro-mashandiro anonzi Mwedzi, uye vamwe vana vakatumidzwa mazita Mistral, yakatsaurirwa kumabasa asinganyanye kudzvinyirira uye nekudaro ine yakaderera yakaderera batiri kunwa, yakazara 2,06 GHz wachi uye 3 GB ye RAM ndangariro ichiiita iyo yekupedzisira smartphone, zvakanyanya zvekuti inowana yepamusoro zvibodzwa mukuwongorora kwakawanda kwekuita. Isu pasina mubvunzo tiri parunhare zvakanyanya pamusoro yemusika kusvika kune Hardware zvine basa zvisinei nekuti pabepa nhamba dzinogona kusatenderedza iwo mashoma purists. Zvingave sei zvimwe, kubata mabasa echokwadi pakati pezvimwe zvinhu, ine co-processor, Apple's M11.
Mune mamwe ese echikamu che Hardware tinowana akawanda akajairwa maficha anofambidzana nemamwe mamodheru ekambani. Panyaya yekubatana kwatinako 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5 kubatanidza uyezve iyo NFC iyo inoshanda ese ari maviri maAirPods uye iyo Apple Tarisa uye isingabatanidzi nzira yekubhadhara Apple Bhadhara.
Zvingaite sei kuti zvisadaro, Apple yakazopedzisira yasanganisira Qi isina waya yekuchaja tekinoroji, inoenderana nechero chero charger yeaya maitiro, kuitira kuve nekwanisi kuve neiri bhatiri bhatiri risina chimwe chinhu uye hapana chakaderera pane 2.716 mAh yakagadzirira (zvakare nekukurumidza kubhadharisa), iyo inopedzisa ichipa kuita kumwe chete seiyo iPhone 8 Plus maererano nekusununguka. Kana riri guruva nemvura, chimwe chinhu chakajairika panguva ino yefoni, tinowana zvitupa zvakafanana neiyo iPhone 8, IP67 kushorwa kwemvura.
Iyo yakajeka kwazvo skrini Apple yakambovakwa parunhare
Hazvigoneke kudzivirira kuisa iyo iPhone X padhuze neiyo iPhone 8 uye uchifunga kuti, kunyangwe iyo skrini yeiyo iPhone 8 iri yakanaka, iyo yeiyo iPhone X inotamba chaizvo mune imwe ligi. Mhedzisiro yekutanga mune akasiyana mwenje mamiriro akatisiya isu tichishamisika, kunyangwe muchokwadi isu takanzwa sekunge tiri pamberi pechizvarwa chekupedzisira Samsung Galaxy. Nekudaro, iyo tekinoroji Tone True kuti isu takakwanisa kuona kumberi kunoita nyasha dzinogamuchirwa kune iro OLED tekinoroji pani. Hapana chimwe uye hapana chakaderera pane 5,8 ″, resolution yese ye2436 × 1125 (458 dpi) Chokwadi Tone. Kujeka kunozvibata nenzira inopfuura chaiyo, uye poindi inoshamisa maererano nemiyedzo yedu matauriro evachena, nzvimbo ine mhando iyi yemapaneli eOLED anowanzo tenderera.
Mavara eichi skrini anokubata iwe ipapo ipapo, icho chimwe chimiro. Apple yanga yakanyatsojeka nekuchinjira kune iyi mhando yepaneru, chatisingazive ndechekuti inguva yakareba sei ichazokwanisa kutsungirira usati waendesa hwese hwese hwezvigadzirwa kune ino tekinoroji. Izvo hazvitore danho pakutenga, asi ndizvo zvaunotarisira kubva kufoni iyo inodhura anopfuura chiuru euros. Chimwe chinonyanya kushamisa ndechekuti mune saizi yakamanikidzwa yakadaro inogona kuratidza zvirimo zvakanyanya, iyo skrini haina kutambiswa zvachose, ichirova kuti iyo Cupertino kambani inokwanisa sei kuita kuti iwe ukanganwe nezve yepamusoro tab mune mashoma mashoma.
Chii chakaita kushandisa iOS 11 pane ese screen foni?
Ndinofanira kubvuma kuti ndakanga ndisina chokwadi, Kusvikira ini ndaive nayo mumaoko angu uye ndakashamisika kuzviwana ndiri kushandisa zvese zvirimo pasina chero mirairo yepamberi, ini handina kuzvitenda. Bhatani reKusha haripo, asi harina kushaikwa chero, Apple yaita kusvetuka kukuru mumushandisi interface yatakamboona. Iyo Control Center inodzika kubva kumusoro kwekurudyi kona, zvakafanana zvinoitika neNotification Center asi kubva kumusoro kwekurudyi kona. Zvichakadaro chiratidzo che multitasking chinenge chisinganzwisisike, pamwe neiyo yakabudirira switch switch pazasi. Apple yakwanisa kuchinjisa iOS 11 yeiyo iPhone X sekunge vakazvarwa vakabatana. Chete paunomira kuti ufunge nezvazvo ndipo paunowana kuti Apple yakafanirwa kuisa mari mairi sei, uye pamusoro pezvese kuti yakabudirira sei.
Iwo mageneral application akachinjika zvakakwana nenzira yekuti iwe uratidzike kunge urikushandisa remangwana remhando yeIOS, uye sezvandambotaura paSocial Networks, gamuchirai kune ramangwana neiyo nyowani iPhone X, smartphone pasina mubvunzo pamberi payo nguva, uye ndizvo munguva pfupi chete inokwanisa kukugonesa kuti urikutarisa pane yakanakisa iPhoneNdoti chii, yakanakisa nhare nakare kose.
Chiso ID iri kugara, ruzivo rwedu neiyi tekinoroji
Ndinofanira kutaura kuti ndakauya nekusarura kwakawanda pamusoro peiyi tekinoroji nyowani iyo Apple yakasarudza kutiisa ne shoehorn, ini ndinoona pano semudiwa mukuru weTouch ID, kwandiri imwe yekufambira mberi kwakakosha kwazvo munyika yehunyanzvi hwefoni munguva pfupi yadarika. makore. Uye aya ndiwo mauyiro atakaita kuFace ID, inoonekwa kumeso system iyo iwe zvaunoshamisika kuti unokwanisa kumisikidza nemasaini mana mumasekondi asingasviki makumi maviri asi ... inoshanda zvakadii? Zvakanaka chokwadi ndechekuti inoshanda chaizvo, asi haina kukwana. Kutaura chokwadi ini handina kuwana kunonoka kukuru kupfuura izvo zvataizowana tichishandisa, semuenzaniso, Bata ID. Dambudziko richauya mune mamwe mamiriro asingafungidzike ezuva, saka handingashamiswe kana semunhu anofungidzira ndakapedzisira ndasarudza kodhi yekodhi.
Dai isu taizopa Face ID mamakisi, isu chokwadi taizopa iyo A, zvirinani tichifunga izvo zvinopihwa nemakwikwi, asi isu tichafanirwa kuziva mashandiro ehurongwa zera uye nemabatiro ainoita mune mamwe mamiriro. Ngazvive sezvazvingave, chiitiko changu chekutanga chave chinoshamisa, isu takakwanisa kuchizarura kunyangwe munzvimbo dzisingaite, Apple yakashanda zvakanyanya paFace ID, asi pamwe veruzhinji havana kunyatsogadzirira chimwe chinhu chakadai.
Iwo makamera eiyo iPhone X anotora chigaro chekumashure
Zviri pachena kuti Apple yakashanda padanho re software mukugadzirisa mifananidzo. Tinotanga nekamera mbiri yekumashure yeiyo iPhone X, iine kurongeka kwakamisidzana uye inofamba zvine hukasha kupfuura muiyo iPhone 8. Ose sensors ane 12 Mpx, iine aperture ye f / 1.8 yeimwe yacho uye f / 2.4 yeimwe. Ehezve, isu tinowana kugadzikana kwemhando yepamusoro, OIS kune ese maseru, imwe yemisiyano neiyo iPhone 8 Plus inochengetedza iyo OIS kune imwe chete yema sensors. Kune iwo akanakisa mafoto akanakisa kupenya, Ichokwadi Tone yeasinga pfuure pamana e LED mwenje poindi Kutora mifananidzo ndizvo zvaunotarisira kubva parunhare rwekupedzisira, 94 mapoinzi akawanikwa neiyo iPhone 8 kamera uye isu hatitarisiri chero zvishoma kune iyo iPhone X.
Yakadzika mwenje yemukati mufananidzo kubva ku iPhone X
Yekamberi kamera, isingafungidzike 7 Mpx ine f / 2.2 aperture iyo inotsigirwa neiyo Yechokwadi Kudzika sensors nechinangwa chekuzadzisa blur mhedzisiro kunyangwe iine imwechete mufananidzo sensor. Nezvo isu tinowana imwe yeakanakisa selfie makamera pamusika, makwikwi acho ari kure chaizvo nehunhu hunopihwa neApple maererano neselfie, imwe yemapoinzi ayo asina kusimba mumakore apfuura.
Kana zviri zvekurekodha vhidhiyo, tichava nesarudzo yemahara yekugadzirisa Yakazara HD pa20, 60 uye 240 FPS, pamwe ne4K pa24, 30 kana 60 FPS, iyo inoita kuti ive nharembozha ine yakanakisa yekurekodha kamera pamusika, izvozvi. Inoperekedzwa nekaviri kugadzikana system, mhedzisiro yacho iri pachena inoshamisa.
Pfungwa dzeMupepeti: Iyo Yakanakisa Nhare
Zvisinei nekusahadzika kwangu kubva panguva yekutanga, chokwadi ndechekuti Apple yakwanisa kuburitsa iwo mavara zvakare kuti andinakidze semwana nehunyanzvi hwayo. Takatarisana ne iPhone iri chaizvo zvese zvatave kubvunza Apple kwemakore, dhizaini yekushinga yaunoda kana zvishoma, asi iri eccentric uye inosiyanisa, pamwe nehunyanzvi hweFace ID. Muchikamu che software ndipo Apple yave ichisiya mimwe yakaputsika moyo nguva pfupi yadarika, asi ingori nguva shoma neiyo iPhone X mumaoko ako yakakosha kuziva kuti ivo vachiri neakanakisa masoftware mainjiniya mumapoka avo.
Kwete Kubata ID
Chaunofanirwa kujekesa ndechekuti iyo iPhone X chishandiso chepamusoro, chimwe chinhu chakagadzirwa zvakanyanya kupfuura kuperekedza homwe yako, haugone kutenga iPhone X nekuti unoda foni, unofanirwa kuda basa rehunyanzvi padanho rekugadzira. . Asi zvese izvi zvine mutengo, uye Apple inoziva chaizvo nezvazvo, yagadzira mudziyo whim kuti hapana munhu anoda asi vazhinji vanoda. Kana iwe uchida kuzvikurudzira kuti uri kutarisa kune chaiyo terminal, iyi haisi yako terminal. Kana izvo zvaunoda kukwira zvakanakisa pamusika uye unakirwe tekinoroji zvakare, unogona ikozvino kuzvichengeta. Apple yakashandura zvakare iyo mitambo yemutambo, isu hatisi munguva ye iPhone pasina zvimwe, tinogamuchirwa kune iyo iPhone X era.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Isu tinoongorora iyo iPhone X, iyo foni inoisa mucherechedzo wenguva
Chinyorwa chakanakisa kwazvo Miguel!
Renmy Enriquez akadaro
Ini ndakada chinyorwa Miguel, ndiri kufara kwazvo nezve iyi nyowani iPhone, ini ndichingori mucheche mune ichi chinhu nezve iPhones uye ini ndave kutodanana naApple. Nguva yakawandisa yakatambiswa pa android, asi haina kunonoka kuita sarudzo dzakanaka. Ini ndiri mudiwa wehunyanzvi uye ndinemusangano wefoni uye ndakaedza dzinenge dzese mwaka uye se iPhone hapana kana chaicho. Ndinovimba uye rimwe zuva ndinogona kuva nazvo mumaoko angu muCuba.
Pindura kuna Renmy Enriquez
Juan Arenas akadaro
Iko kufunga kusanzwisisika. Iyo mbozhanhare ndeimwe yeasina kusimba.
Dhizaini yakashata, kuratidzwa neiyo notch kumusoro hakuna musoro. Musana wacho unoita kunge Sony Z1, haina headphone jack, haina muverengi weminwe, haina bhatani repamba, haina infrared port, haina iris scanner ... Bluetooth hairegi mafaera kuti apfuure, iyo NFC inoshandiswa chete kubhadhara, iyo sisitimu yekushandisa haina kugadziridzwa, haina kadhi reSMSD ... MUKUPEDZISIRA, IYO YEMAHARA MHOSI YEMAHARA.
Pindura Juan Arenas
jjajjajja, ndakaseka. Nekuti ndinofungidzira zvako kuti irony, handiti?
Michini chiteshi? Unogara nyika ipi? Izvo zvakamira kushandiswa makore mazhinji apfuura. Icho chinhu chisingachashandi. Micro sd kadhi? Chii chaunoda iwe neApple? Iris muverengi? Iyo Samsung yakanyengerwa neiyo HD foto. Tsvaga zvishoma pamberi pemurume ...
Imwe pfungwa yakatenga zvimwe ...
Hongu, ikozvino ndinogara kuimba yemba muSwitzerland nekuda kwemari iyo Apple yaakandipa yemafungiro angu.
Chinyorwa chakanaka!, Uye chakabudirira zvikuru kubva pakuona kwangu. Makorokoto
Fran Murciego akadaro
Yakanaka chinyorwa Miguel !!! Ndakasiya ndave kuda zvimwe.
Pindura Fran Murciego
Apple inotangisa yechipiri beta yeIOS 11.2 yeiyo iPhone X
ShutterGrip, yakanaka yekutora mifananidzo ne iPhone yako